Shuruudaha - Buddhatrends
Websaydaan waxaa maamula Buddhatrends. Dhamaan goobta, shuruudaha "anaga", "our" iyo "our" waxay tixraacayaan Buddhatrends. Buddhatrends waxay bixisaa boggaan, oo ay ku jiraan dhammaan macluumaadka, qalabyada iyo adeegyada laga heli karo boggan adiga, qofka isticmaala, shardi ah aqbalaadda shuruudaha, shuruudaha, siyaasadaha iyo ogeysiisyada halkan lagu sheegay.
By booqanaya goobta iyo / ama wax naga iibsiga, aad galaan our "Service" oo ku heshiin in aad raacdo shuruudaha soo socda iyo xaaladaha ( "Terms of Service", "Terms"), oo ay ku jiraan kuwa la eego dheeraad ah iyo shuruudaha iyo siyaasadaha tilmaansado arrintaasna iyo / ama la heli karo by HyperLink. Terms of Service Kuwani waxay khuseeyaan dhammaan dadka isticmaala ee goobta, oo ay ku jiraan iyada oo aan dadka isticmaala xaddidaadda kuwa daalacashada, waratada, macaamiisha, baayacmushtariyaasha, iyo / ama qayb ka mid ah content.
Fadlan akhri Shuruudaha Service si taxadar leh ka hor inta helitaanka ama isticmaalaya website. By helitaanka ama isticmaalaya qayb ka mid ah goobta, aad ogolaato in lagu xidho kuwaas Terms of Service. Haddii aadan ku heshiiyaan in ay dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha ka mid ah heshiiskan, ka dibna waxaa laga yaabaa in aadan heli website ama isticmaal adeegyada wax. Hadday Yihiin kuwaasu Terms of Service waxaa loo tixgeliyaa dalab, aqbalaada waxaa cad ku koobnayn kuwan Terms of Service.
Kasta qaababka ama qalab cusub oo lagu daray in dukaanka hadda sidoo kale la hoos gelin doonaa si ka Terms of Service. Waxaad u eegi karaan version ugu hadda ka mid ah Terms of Service waqti kasta on this page. Waxaan xaq u leedahay inaad cusboonaysiiso, beddelo ama lagu badalo qayb kasta oo ka mid ah Terms of Service by dhajinta updates iyo / ama isbedel ku our website leenahay. Waa masuuliyadaada si loo hubiyo this page xilliyo isbedelada. Your isticmaalka sii of ama helitaanka internet-ka ee soo socda dhajiyay isbedel kasta oo ka dhigan ogoshahay isbedel kuwa.
QAYBTA 1 - ERAYADA DUKAANKA ONLINE
By heshiis kuwaas Terms of Service, ayaa wakiil kaa ah in aad tahay ugu yaraan da'da loo badanyahay ee gobolka ama gobolka aad deggan tahay, ama in aad tahay da'da loo badanyahay ee gobolka ama gobolka aad deggan tahay iyo aad na siisay oo aad oggoshihiin u ogolaan kasta oo aad ku tiirsan yar in ay isticmaalaan this site.
Waxaad ma laga yaabaa inay isticmaalaan waxyaabaha our kasta oo ujeeddo sharci daro ah ama aan la ogalayn mana laga yaabaa in aad, in isticmaalka adeegga, ku xad gudubto sharciyo kasta oo aad awood (oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn sharciyada copyright).
QAYBTA 3 - saxnimada, Dhammaystir iyo khadka waqtiyeynta MACLUUMAADKA
QAYBTA 4 - IN WAX LAGA BADALO ADEEGA IYO QIIMAHA
5 QAYBTA - badeeco ama adeegyo (haddii ay khuseyso)
Waxaan ka Yeellay dadaal kasta si ay u muujiyaan sida ugu saxsan ee suurtagal ah midabada iyo images of waxyaabaha our in muuqan at dukaanka. Ma ballan qaadi karno in bandhigay monitor computer aad ee midab kasta oo ay noqon doontaa mid sax ah.
QAYBTA 6 - saxnimada BIILASHA IYO XISAABTA MACLUUMAADKA
Wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan dib u eegaan our Policy dib.
7 QAYBTA - AALADAHA OPTIONAL
Waxaan sidoo kale laga yaabaa, in mustaqbalka, waxay bixiyaan adeegyo cusub iyo / ama muuqaalada internetka ee (oo ay ku jiraan, in la sii daayo qalabka iyo khayraadka cusub). muuqaalada iyo / ama adeegyo cusub noocan oo kale ah ayaa sidoo kale la hoos gelin doonaa si Shuruudaha Service.
QAYBTA 8 - LINKS SADDEXAAD XISBIGA-
Ma nihin qabsan waxyeelo kasta ama magdhow la xidhiidha iibka ama isticmaalka alaabta, adeegyada, khayraadka, content, ama wax kasta oo xawaalad kale sameeyey oo xidhiidh la leh kasta oo websites dhinac saddexaad. Fadlan si taxadar leh u eegaan siyaasadaha iyo hab-dhaqanka ah ee xisbiga saddexaad iyo hubi inaad fahamto ka hor inta aadan ku lug leh macaamil kasta. Cabashooyinka, sheegashada, walaac, ama su'aalo ku saabsan waxyaabaha dhinac saddexaad waa in lagu hagaajiyaa ka-dhinac saddexaad.
QAYBTA 9 - COMMENTS USER, Jawaab celinta iyo u gudbinta KALE
Haddii, at our codsiga, kuu soo diri gudbiyeen gaar ah qaarkood, (waayo, entries tusaale ahaan tartanka) ama aan codsi naga kuu soo diri fikrado hal abuur leh, talooyin, soo jeedinta, qorshayaasha, ama qalabka kale, haddii online, by email, by mail boostada, ama haddii kale (si wadajir ah, 'comments'), waxaad isku raacsan yihiin in aan laga yaabaa, wakhti kasta, iyada oo aan la xadidayn, edit, nuqul, u daabacaan, qaybiyo, turjumo iyo haddii kale isticmaali dhexdhexaad ah wax kasta oo comments in weeraryahanka aad noo. Waxaan nahay oo noqon waajib (1) ma si ay u ilaaliyaan wax kasta oo comments kalsooni doonaa; (2) inaad bixiso magdhow wixii comments; ama (3) in ay ka jawaabaan wixii comments.
Waxa laga yaabaa, laakiin waajib kuma aha in, monitor, edit ama ka saar content in aan ogaado in aannu lasameeyay kaliya waa sharci darro ah, weerar, hanjabaad, qadaf ahayn, ceeb u soo jiidaya, qaawan, fisqi ama haddii kale objectionable ama ku xadgudba hantida aqooneed ee dhinac kasta ee ama kuwan Terms of Service .
QAYBTA 11 - Khaladaadka, qalad iyo kuwa la tirtiray
QAYBTA 12 - ISTICMAALLO MAMNUUCA AH
Waxa intaa dheer in laga reebay kale sida ku xusan ee Terms of Service, aad waxaa ka mamnuuc ah oo isticmaalaya site ama ay ka kooban: (a) ujeeddo kasta sharci darro ah; (B) in ay dalbi kuwa kale si ay u qabtaan ama ka qayb kasta oo falal sharci darro ah; (C) in ay ku xad-kasta, federaalka, xeerarka gobolka ama gobolka, sharciyada, xeerarka, iyo xukummadoodii maxaliga ah ee caalamiga ah; (D) in ay ku xadgudbaan, ama ku xad our xuquuqda hantida aqooneed ama xuquuqda hantida aqooneed ee dadka kale; (E) in la kadeedo, ku xadgudubka, cay, waxyeelo, duraanna, xanta, xaqiraan, cabsiiyo, ama takoori ku saleysan jinsiga, nooca galmada, diinta, qowmiyadda, jinsiyad, da'da, asalka qaranimada, ama naafo; (F) in ay soo gudbiyaan macluumaad been ah ama marin habaabin, (G) in ay geliyaan ama baahin fayrusyada ama nooc kasta oo kale ee code xaasidnimo ah ama loo isticmaali doono waxaa laga yaabaa in hab kasta oo saameyn ku yeelan doonin ka shaqeynayaan ama hawlgal of Service ama website kasta oo la xiriira, websites kale, ama internetka; (H) si ay u ururiyaan ama ay ula socdaan macluumaadka shakhsi ahaaneed ee dadka kale; (I) in ay spam, phish, pharm, marmarsiiyo, caaro, gurguurto, ama xoqo, (J) wixii Ujeedada fisqi ama kuwa sinaysta, ama (k) inay faragelin ama Gudo muuqaalada ammaanka ah Service ama website kasta oo la xiriira, websites kale, ama internetka ah. Waxaan xaq u leeyahay inuu joojiyo isticmaalka adeegga ama website kasta oo la xidhiidha ku xadgudbay wax ka mid ah isticmaalka mamnuuc leenahay.
QAYBTA 13 - AFEEF OF fasaxyada; Xadidaadda mas'uuliyadda
Waxaad si cad isku raacsan yihiin in isticmaalka, ama awood la'aanta in ay isticmaalaan, adeegga waa halis aad kaliya. Adeegga iyo dhammaan alaabta iyo adeegyada idiin dhiibay adeegga yihiin (marka laga reebo sida cad u sheegay noo by) la siiyaa 'sida uu yahay "iyo" sida loo heli karo' si aad u isticmaasho, oo aan wax matalaad, fasaxyada ama xaaladaha nooc kasta, sidoo kale muuqata ama maldahan, oo ay ku jiraan fasaxyada oo dhan maldahan ama shuruudaha merchantability, tayada merchantable, taam ah gaar ahaan ujeedada, cimri dherer, horyaalka, iyo non-jebinta.
Ma jiri doonto Buddhatrates, agaasimayaasheena, shaqaalaha, shirkadaha, wakiilada, qandaraaslayaasha, shaqo joojiyaha, alaab-qeybiyeyaasha, bixiyeyaasha adeegga ama shati-bixiyeyaasha inay mas'uul ka yihiin waxyeello, lumis, sheegasho, ama wax toos ah, aan toos ahayn, dhacdo, ciqaab, khaas ah, ama Dhibaatada ka timaadda nooc kasta, oo ay ku jirto, aan xadidnayn faa'iido, dakhliga lumay, keydka lumay, lumista macluumaadka, kharashka beddelka, ama waxyeelo la mid ah, haddii ku salaysan qandaraas, caday (oo ay ku jirto dayacaad), masuuliyad adag ama haddii kale, adeegsiga mid kasta oo ka mid ah adeegga ama alaab kasta oo lagu iibsado adeegga, ama wixii dalab kale oo la xidhiidha si kasta oo aad u isticmaasho adeegga ama wax soo saarka, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidneyn, qalad kasta ama maqnaansho kasta, ama mid khasaaro ama waxyeelo nooc kasta oo ka timaadda isticmaalka adeegga ama wax kasta oo ah (ama shey) oo la soo dhajiyey, la gudbiyey, ama haddii kale laga helayo adeegga, xitaa haddii lagugula taliyay suurtagalnimada. Sababtoo ah dawlad-goboleedyo qaarkood ama aan awood u lahayn in ay u oggolaadaan ka-saarista ama xaddidaadda mas'uuliyadda waxyeelada soo gaartay ama waxyeellada ah, ee dawladahaas ama xukunada, mas'uliyadayadu waa inay xadidan tahay inta ugu badan ee sharcigu ogol yahay.
QAYBTA 14 - Beriyeelaynta
Waxaad ku raacsan tahay in aad magdhaw leedahay, difaaci kartid, iyo inaad naga ilaalisid Buddhatrends iyo waalidkeena, shirkadaheena, shirkadaha, lamaanayaasha, saraakiisha, agaasimayaasha, wakiilada, qandaraas bixiyeyaasha, shatiyeyaasha, bixiyeyaasha adeega, shirkad hoosaad, alaab-qeybiyeyaal, shaqo-joojin iyo shaqaale, kharashka qareenka, oo ay sameeyeen cid kasta oo sadexaad sababo ama ka soo baxa jebinta Shuruudaha Adeegga ama dukumintiyada ay ku dhex jiraan tixraaca, ama xadgudub ku ah sharci kasta ama xuquuqda dhinac saddexaad.
15 QAYBTA - SEVERABILITY
Haddii ay dhacdo in bixinta kasta oo ka mid ah Terms of Service waxaa ka go'an in ay sharci darro ah, isagoo madhan ama jiriyaan, bixinta sida ahaatee waxay ahaan doonaan hirgalin ilaa xad buuxda sharcigu ogol yahay lagu dabaqi karo, iyo qaybtii Karin waa in loo tixgeliyo in la soocay Shuruudaha Service, go'aanka noocaas ah ma saameyn doonaan jiritaanka iyo enforceability kasta oo qodobada kale ee harsan.
QAYBTA 16 - JOOJINTA
Terms of Service Kuwani waa wax ku ool ah haddii iyo ilaa joojiyo by adiga ama noo. Waxaad joojin kartaa kuwan Terms of Service waqti kasta oo ay nagu ogaysiinaya in aad mar dambe ma rabto in aad isticmaasho Adeegyada our, ama marka aad ka joojin isticmaalaya our site.
Haddii in our xukun kaliya aad ku guul dareysato, ama aan ka shakisan tahay in aad ayaa ku guuldareysatay, in ay u hoggaansamaan dheer ama bixinta oo ka mid ah Terms of Service kasta, waxaan sidoo kale ku joojin karaa heshiiskan waqti kasta ogeysiis la'aan iyo aad sii joogi doonaa masuul ka ah tiro dhan sababtoo ah ilaa oo ay ku jirto taariikhda joojinta; iyo / ama sida u diidi karaan inaad hesho Adeegyada our (ama qayb ka mid ah).
QAYBTA 17 - HESHIISKA BUUXA
failure The oo naga mid ah in ay fuliso wax sax ah ama bixinta oo ka mid ah Terms of Service ahayn waa cafinta ee midigta ama bixinta sida.
Shuruudaha Kuwani of Service iyo siyaasadaha ama xeerarka hawlgalka posted noo by on this site ama in loo eego Service ayaa noqoneysa heshiiska oo dhan iyo fahamka u dhexeeya annaga iyo idinka iyo maamulo isticmaalka adeegga, superseding heshiis kasta oo ka hor ama contemporaneous, isgaarsiinta iyo soo jeedinta , in afka ama qoraal ah, oo u dhexeeya annaga iyo idinka (oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, wax versions ka hor ah Terms of Service).
mugdiga kasta Fasirka oo ka mid ah Terms of Service waa mid aan noqon dhanka ah xisbiga qoritaanka.
QAYBTA 18 - XEERKA maamula
Shuruudaha Adeegyada iyo heshiisyada gaarka ah ee aan ku siinno Adeegyada waa in lagu maamulaa oo lagu muujiyaa sharciyada 5900 rue de verdun montreal Quebec CA H4H 1M4.
19 QAYBTA - isbedel ERAYADA ADEEGGA
Waxaad u eegi karaan version ugu hadda ka mid ah Terms of Service waqti kasta at this page.
Waxaan xaq u leenahay, at our lasameeyay kaliya, si loo casriyeeyo, la beddelo ama lagu badalo qayb kasta oo ka mid ah Terms of Service by dhajinta updates iyo isbedel ku our website. Waa masuuliyadaada si loo hubiyo our website xilliyo isbedelada. Your isticmaalka sii of ama helitaanka our website ama Service soo socda dhajiyay isbedel kasta kuwaas Terms of Service dhigan ogoshahay isbedel kuwa.
QAYBTA 20 - XIDHIIDHKA WARBIXINADA
Su'aalaha ku saabsan Shuruudaha Adeega waa in la soo diraa iyadoo la isticmaalayo foorka qaabka xiriirka